KoLatt Book Shop
ခေါင်းစဉ်၃၃ ခုရှိတဲ့အထဲက နံပါတ်၄ #LiveYourLife ထဲက စာသားလေးတစ်ချို့ကို ပြန်ပြီးဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
* So How do u live before u die ?
ဘဝဆိုတာ အသက်ရှိနေတုန်းသာ တန်ဖိုးရှိတာ. . . ခုန်နေတဲ့နှလုံးရပ်သွားတာနဲ့ ဘာမှတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူး... ဒါကြောင့် အသက်ရှင်နေတုန်းအချိန်ဟာ ဘဝမှာအကောင်းဆုံးပါ ... ဘယ်လိုဒုက္ခနဲ့ကြုံကြုံ ဘယ်လိုအခက်အခဲနဲ့ တွေ့တွေ့ ခုထိအသက်ရှင်နေသေးတယ် ဆိုတာကိုက Its suchablessing ပါ...
- အခွင့်ရေးကောင်းတွေရှိရင် အသုံးချပါ. . . ဘယ်သူ့မျက်နှာကိုမှ မငဲ့ပါနဲ့... ကိုယ်အသုံးမချရင် သူတို့ အသုံးချပစ်ကြမှာ...
- ကိုယ်ချစ်တဲ့ အရာတွေကို ဝယ်ပါ... ဝယ်ပြီးရင်လည်း သုံးပါ... တစ်ချို့က ဝယ်တော့ ဝယ်တယ်... ပြီးရင် ဗီရိုထဲ သော့ခတ်သိမ်းထားရော... ဘာ အကျင့်မှန်း မသိ...
- ပျော်စရာတွေဟာ ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်... ပျော်စရာတွေကို ရှာဖွေပါ... ရယ်မောပါ... စိတ်ညစ်စရာရှိလာခဲ့ရင်တောင် ငါ မသေသေ ပါလားဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ပျော်ပစ်ပါ...
- ခရီးတွေ သွားပါ... ခရီးသွားဖို့ အချိန်မရှိလို့... ပိုက်ဆံမရှိလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေဟာ ကိုယ်တကယ် ခရီးမသွားချင်လို့ စိတ်ကနေ ပေးတဲ့ ဆင်ခြေတွေပါ...
- ငါ အသက်ကြီးပြီမို့ ဒါ မလုပ်သင့်တော့ဘူး... ဒါ မဝတ်သင့်တော့ဘူး... ဒါနဲ့ မလိုက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးတွေရှိရင် ထုတ်ပစ်ပါ... အသက်ဆိုတာ မွေးဖွားရာ ခုနှစ်အလိုက် ကြီးတယ်... ငယ်တယ် ဆုံးဖြတ်ကြရတာ... ကိုယ်ခန္ဓာ ကျန်းမာသန်စွမ်း ဖျတ်လတ်နေသရွေ့ သင့်အသက်က ဘယ်တော့မှ မကြီးပါဘူး....
- ကိုယ့်ကို bully လုပ်တဲ့သူတွေ... personal attack လုပ်တဲ့သူတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ ဘဝမဆုံးပါစေနဲ့... လူတွေကတော့ တိုက်ခိုက်မှာပဲ... ဟာသလုပ်ကြမှာပဲ... အတင်းပြောကြမှာပဲ... လှောင်ကြမှာပဲ... ဒါကို အရှုံးနဲ့ ဒူးထောက်ပြမလား ... အပြုံးနဲ့ပြန်နှုတ်ဆက်မလား... ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှု ဖြစ်သွားပြီ...
အဲ့ဒီတော့ အိ ပြောချင်တာက သေဆုံးခြင်းဆိုတာ ဘဝမှာ အကြီးမားဆုံး ဆုံးရှုံးမှု မဟုတ်ပါဘူး...
အကြီးမားဆုံး ဆုံးရှုံးမှုဆိုတာ ရှင်လျက်နဲ့ သေဆုံးနေရတဲ့ ဘဝကို ပြောတာပါ...
ခံစားပါ... သို့သော် မနာကျင်ပါစေနဲ့...
Live your life, no excuse